भर्खरै पत्ता लाग्यो कोरोना भाइरसको अर्को नयाँ लक्षण ! यस्तो छ नयाँ लक्षण , सबैले जान्नै पार्ने ! - Alert Khabar
Homeसमाचारभर्खरै पत्ता लाग्यो कोरोना भाइरसको अर्को नयाँ लक्षण ! यस्तो छ नयाँ लक्षण , सबैले जान्नै पार्ने !
पाचन प्रणालीलाई असर गर्ने गरी कोरोना भाइरस संक्रमणले बिरामीको गन्धको शक्ति र मुखको स्वाद बिगार्दैछ ।यद्यपि, त्यस्ता समस्या १५ प्रतिशत बिरामीहरुमा भइरहेको छ । कोरोना भाइरसले सबैभन्दा सास फेर्ने क्षमतालाई असर गर्छ।कोरोना बिरामी बढ्दै छ, यसको अन्य प्रभावहरु पनि छन्। भारतमा राज्य दून मेडिकल कलेज अस्पतालको श्वासन रोग विभागका प्रमुख तथा कोरोनाका नोडल अफिसर डा. अनुराग अग्रवालले भने कि धेरैजसो बिरामीको सामान्य लक्षण हुँदैन ।